जान्नुहोस् औँलामा कति वटा च्रक हुने मान्छे भविष्यमा कस्तो ! कति शंखको फल के हुन्छ…… – SUDUR MEDIA
जान्नुहोस् औँलामा कति वटा च्रक हुने मान्छे भविष्यमा कस्तो ! कति शंखको फल के हुन्छ……
August 4, 2021 AdminLeaveaComment on जान्नुहोस् औँलामा कति वटा च्रक हुने मान्छे भविष्यमा कस्तो ! कति शंखको फल के हुन्छ……
औलाहरूको र औठाको टुप्पोमा जुन भुमरी झै घुमेको हुन्छ त्यसलाई चक्र भनिन्छ । जुन व्यक्तिको औंलामा यस्तो प्रकारको चक्र छ भने जातकको धार्मिक प्रवृत्तिको र धर्ममा जोडिएको कार्यमा विशेष रुचि हुन्छ । साथै ऐर्श्वर्यद्वारा पुर्ण उत्तमजीवन विताउँदछन् । यस्ता व्यक्तिहरू रहस्यमय, व्यवहारिक विचार बला बनाउनुको साथै अनुसन्धान र नयाँ विचारको जन्म दिनेखालको हुन्छन् ।
चक्रको औला अनुसार फलः १ औठामा(बुडि औँला) चक्र छ भने : जातकलाई पैत्रृक सम्पत्तिको सुख मिल्छ र त्यस सम्पत्तिलाई बृद्धि गर्ने हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू श्रेष्ठ गुणको स्वामी हुनुको साथै कठिन कार्य गर्नको लागि सधै तत्पर रहन्छ र ऐर्श्वर्यद्वारा पुरा जीवन यापन गर्दछ । २. औठा एवम् तर्जनी (चोर औँला) औलामा चक्र भएमा : जातकले समाजमा धन, यश, सम्मान प्राप्त गर्दछन् र प्रत्येक इच्छा पुर्ण हुन्छ ।
३. तर्जनी औलाको अग्रभागमा चक्र छ भने : जुन व्यक्तिको औलामा यस्तो चिन्ह छ त्यस व्यक्तिले माता -पिता, भाई बन्धुद्वारा धन सम्पत्ति प्राप्त गर्दछ । व्यवसायी, राजनेता, चिकित्सक यस श्रेणीमा पर्दछन् । जातकले कार्य कुशल एवम् इश्वरमा आस्था र विश्वास राख्नेवाला हुन्छ । ४.मध्यमामाझी (औँला) औलाको टुप्पोमा चक्र भएमा: जातकलाई धार्मिक कार्यद्वारा धनलाभ गर्नुका साथै धार्मिक नेता या पुजारी हुन्छ ।
५.अनामिका औलामा चक्र छ भने : त्यस्ता व्यक्तिलाई आफ्नो मित्र वगद्वारा धनलाभ हुनुका साथै व्यापारबाट लाभान्वित हुन्छ । ६.अनामिका एवम् तर्जनी औलामा चक्र भएमा : जातक व्यवहारिक एवम् स्नेहशील हुन्छ । ७. कनिष्ठ (कान्छी) : औलामा चक्र छ भनेः यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यवसायद्वारा धन प्राप्ति गर्दछन् । जातक शास्त्रको ज्ञाता हुनुको साथै लेखन कार्यमा निपुण हुन्छन् ।
यदि सम्पुर्ण औलाहरूको टुप्पोमा चक्र छ भने जातकलाई भाग्यशाली, यशस्वी एवम् वाकपटु र सुखी बनाउँदछ । यदि चन्द्र पर्वतमा चक्रको चिन्ह छ भने स्जातक जातिकालाई पानीमा डुब्ने वा पानीको भय र अत्याधिक टाउको दुःख्ने समसयले जीवनभरि सताईरहन्छ ।
श्रीमानलाई बिदेश पठाएर परपुरुषसँग राती ८ बजे बन्द कोठा भित्र श्रीमती रं’गेहात प’क्राउ, प्रहरी पुग्दा जे भयो ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
आजको दिन ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कतिमा हुँदैछ कारोबार……
आफ्नो पूर्वपति मनोज गजुरेलको विहेको खबर सुनेर तात्यो मिना ढकालको पारो, मनोजले…..को लागि मात्र विहे गर्न लागेको आ’रोप ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
December 13, 2020 December 19, 2020 Admin